बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे बारे यी कुराहरु धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ
एजेन्सी । बेलायती राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । ब्रेकजिट योजना विस्तारै असफल हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री टेरेजा मे ले जुन ७ मा राजीनामा दिने घोषणा गरिन् ।
बेलायती राजनीतिमा आएको तरंगले प्रधानमन्त्री मेलाई भावुक त बनाएको छ नै, उनी पछि आउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि कठिन यात्रा तय गर्नु पर्ने पक्कै देखिन्छ । मे ले ब्रेकजिटका लागि गरेको संघर्ष एक ठाउँमा छन् भने उनीबारे केही यस्ता कुराहरु रहेका छन् जसबारे कमैलाई थाहा छ ।
उनी ६२ वर्षकी भइन् । उनको पतिको नाम फिलिप मे हो । उनीहरुको सन्तान छैनन् । उनले अस्फोर्ड विश्वविद्यालयबाट भुगोलमा डिग्री हासिल गरेकी छिन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनीसँग २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । उनलाई खाना पकाउन, हाइकिङ जान, क्रिकेट खेल्न औधी मनपर्छ । उनको ५ फिट ७ इन्च अग्ली छिन् ।
सन् २०१० मा जब डेबिड क्यामरुन बेलायतका प्रधानमन्त्री थिए तब मे होम डिपार्टमेन्टमा सेक्रेटरीका रुपमा काम गर्थिन् । उनले एक दशकभन्दा बढी होम सेक्रेटरीका रुपमा काम गरिन् । उनले आप्रबासीहरुमाथि कडा कानुन बनाउनु पर्ने माग राखेकी थिइन् । सन् २०१६ मा उनी क्यामरुनविरुद्ध उठिन् । क्यामरुन् ब्रेकजिटको पक्षमा थिएनन् ।
सन् २०१६ मा ब्रेकजिटका लागि भएको जनमत संग्रहले बेलायती राजनीतिमा ठुलै तरंग ल्यायो । युरोपियन युनियनबाट अलग्गिने निर्णयमा जनमत संग्रह पाएपछि क्यामरुनले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । ब्रेकजिट योजना सफल पार्न आफु सक्षम रहेको भन्दै उनी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा अगाडि आइन् । अन्तत उनी बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् । तर, तीन वर्षको अवधिमा पनि ब्रेकजिट योजना सफल नभएपछि उनले राजीनामा दिने घोषणा गरिन् । उनको यो कार्यकाललाई धेरैले असफल भएको मानेका छन् ।
को हुन् टेरेजा मे को पति, उनीहरुको भेट कसरी भयो ?
उनीहरुको रोमान्टिक लभ स्टोरी रहेको बताइन्छ । पाकिस्तानका पुर्व प्रधानमन्त्री बेजेजिर भुट्टोका कारण उनीहरुको भेट भएको थियो । उनीहरु एक पार्टीमा साझा साथीका कारण भेटिएका थिए । त्यसपछि उनीहरुको भेट बढ्दै गयो र अन्ततः प्रेम विवाहमा परिणत भयो ।
सन् १९८० यी दुईले विवाह गरे । विवाह गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत यो दम्पत्तिलाई सन्तान प्राप्ति हुन सकेन । तैपनि उनीहरु निकै खुसी जोडीका रुपमा परिचीत रहेका छन् । उनका श्रमिान् इनभेष्टमेन्ट बैंकर हुन् जसले मेलाई धेरै अप्ठेरो अवस्थामा सहयोग गरेका छन् ।
मे लाई उनका विपक्षी नेता एन्द्रीया लिडसनले सन्तान नभएको भन्दै कटाक्ष गरेकी थिइन् । सन्तान हुने व्यक्तिले मात्र मातृत्व बुझ्ने र बढी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने जबाफ टिप्पणी गरेकी थिइन् । उक्त टिप्पणीका कारण मे विक्षिप्त भएकी थिइन् । तर, पछि एन्द्रियाले माफी मागेको बताइएको थियो ।
को हुन् मे का माता पिता ?
उनको पिताको नाम रिभरेण्ड हवर्ट ब्रासियर हो । उनी एक एंगलिकन प्रिष्ट थिए । उनको आमाको नाम जाइदी मेरी बार्नेस हो । सन् १९८१ मा उनको पिताको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । पतिको मृत्युपछि विक्षिप्त बनेकी मेरी पनि धेरै महिना छटपटाइ रहिन् । अन्ततः उनको पनि मृत्यु हुन पुग्यो ।
सन् १९५६, अक्टोबरमा जन्मिएकी उनले एकाएक पिता माता दुवै गुमाउन पुगिन् ।
टेरेजा मे को नृत्यको रहस्य ?
दक्षिण अफ्रिकाका केही स्थानीय बालकसँग उनी डान्स गर्दै गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो । अफ्रिका ट्रिपमा उनलाई त्यो क्षण भुल्न अति नै कठिन भएको थियो । उनले धेरैपटक नाच्ने प्रयास पनि गरिन् । उनले नाइरोबिमा पनि नाच्न प्रयास गरिन् । तर, त्यो घटनापछि उनीविरुद्ध आलोचकहरु खनिए । बगिंमहममा भएको एक गम्भीर कन्फ्रेन्समा समेत उनी नाच्न छोडिनन् । आलोचकहरु पनि उनको हर्कतका कारण दया देखाउन छोडेको बताइएको थियो ।
टेरेजा मे ले किन तौल घटाइन् ?
सन् २०१३ मा दुई कारणले गर्दा उनले तौल घटाउनु पर्ने थियो । उनको रगत परिक्षण पछि उनमा स्वास्थ समस्या भएको देखियो । उनमी दुई खाले डायबेटिज देखिए । उनीलाई एक विशेष थेरापीको आवश्यता पर्ने भयो । तर, त्यसले काम गर्न नसकेपछि उनले आफुलाई हरतरह फिट राख्न प्रयास गरिन् ।
मे लाई हाल पहिलो खाले डायबेटिज रहेको छ । उनी दैनिक चारग भाग इन्सुलिन लिने गर्छिन् ।
टेरेजा मे को फेशन र जुत्ता
प्राय उनी सट स्टर्कमा देखिने गर्छिन् । उनलाई ग्लोभ्स पनि उत्तिकै मनपर्छ । उनलाई गाडी चलाउन सहज हुने हुँदा यस्ता खाले कपडा मन पर्ने बताएकी थिइन् । क्लासिक कट्स लुक आफुलाई मन पर्ने र यो बोरिङ नहुने उनले बताएकी थिइन् । ब्राइट कोट कसरी छान्ने र कस्तो बुट लगाउने यस्ता कुरामा उनी अब्बल रहेकी छिन् ।
उनी हाइहिलभन्दा पनि मध्यम हिलको प्रयोग गर्न रुचाउँछिन् । उनको हाइट अनुसार सुहाउने उनको डिजाइनरले बताएका थिए ।
प्राय उनी आधिकारी मिटिङमा रोयल ब्लु ज्याकेट लगाउने गर्छिन् । मिडिया रिपोर्टका अनुरा उनले यो तरिका जर्मन चान्सलर एन्जेल मर्केलबाट अनुशरण गरेकी हुन् ।
टेरेजा मे को तलब कति ?
मिडिया रिपोर्टका अनुसार बेलायती प्रधानमन्त्रीको वार्षिक तलब १५०४०० पाउण्ड रहेको छ । मासिक तलब १२५०० पाउण्ड हुन आउँछ । हप्ताको २९०० पाउण्ड हुन्छ । ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीलार्य एक विशेष अपार्टमेन्ट पनि दिने गरिन्छ ।